Dagaaka Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada dowlada oo garabsanay kuwa AMISOM oo lagu dilay sarkaal ka tirsan DKMG Somalia ( DAAWO SAWIRADA ) | Somalisan.com Home
Dagaaka Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada dowlada oo garabsanay kuwa AMISOM oo lagu dilay sarkaal ka tirsan DKMG Somalia ( DAAWO SAWIRADA ) 1/20/2012 5:22:00 P
waxaana ku sigtay tiro wariyeyaal ah kuwaas oo garigii ay la socdeen bacaad ka glay ka dibna duurka ku kala caraey qaarkoodna ay geedaha dharkii ka jeexjeexeen mana jirto cid ka mdi ah oo waxyeelo ka soo gaadhay .
Dagaalada ka soconaaya Magaaladda Muqdisho oo ilaa galabta ka casirkii ka dib soo garay ayaa waxay hadana dagaalada geysanayaan khasaarooyin culus oo soo kala gaaraaya labada dhinac. Dagaalada ayaa waxaa ku dhintay Taliyihii Dhinaca Saadka ee Ciidamadda Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya laguna magacaabi jirey Saciid Cabdi Barre Asal ahaan reer qardho ahaa, kaasoo ay si gaadmo leh ku dilleen dagaal-yahano ka tirsan Al Shabaab.
warka sarkaalka sawiradiisa iyo ducemntiga halkaan ka daalaco somalisan.com/
sarkaalka oo la oron jirey Saciid Cabdi Barre, ayaa waxaa lagu dillay wadada ka baxda Cisbitaal Carafaat ee aadda Jaamacadda Muqdisho, waxaana rasaas lagu furay gaari ay la-socdeen isago iyo dhawr ka mid ah Ciidamadda Dowladda.
Saraakiisha Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya ayaa waxay xaqiijiyeen in uu weerarkaasi ku geeriyooda Taliyihii Dhinaca Saadka eeCiidamadda Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya Saciid Cabdi Barre, kaasoo ay muujiyeen sida ay dilkiisa uga xun yihiin.
Sidoo kale Xarakada Al Shabaab ayaa waxay ayaa sheegay in dagaalada maanta ka soconaaya Magaaladda Muqdisho ay ku dishay saraakiil iyo ciidamo ka kala tirsan Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya iyo Ciidamadda Amisom.
Ugu dambeen dagaalada ayaa waxay weli ka sii soconayaan Deegaanka Dibida oo ka shisheysa Jaamacadda Muqdisho ee duleedka Degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir, wixiise dagaalada ku soo kordha kala soco wararkayna dambe.